Fahad Yasin “Ninkii aan ku badalan-lahayn baan ku mashquulsanahay, Kheyre waan kala guurnay” - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Fahad Yasin “Ninkii aan ku badalan-lahayn baan ku mashquulsanahay, Kheyre waan kala ...
Kooxaha uu ku shaqaysato Fahad Yasin; Cabdishakuur Cali Mire [Gaala-eri], Siyaad Maxamud Shire iyo Cabdiraxman Dhere ayaa waxa ay ka wadaan dalka gudihiisa iyo dibadiisa olole looga takhalusayo Xasan Kheyre.
Waxaad hoteelada iyo goobaha lagu kulmo ee magalaadda Muqadisho ku arkaysaa kooxo uu soo adeegsaday Fahad Yasin oo sheegayo in dalka uu dhawaan ka dhici doono isbadal siyaasadeed, gaar ahaan in dhawaan la badali doono Xasan Kheyre.
“ Waxaan kuu sheegayaa in waqtiga Kheyre soo dhamaaday, ninkaas (Kheyre) Fahad Yasin waa uga soo dhamaatay, adigaba qiyaas marba hadii Fahad uu soo tufay maxaa u haray?, walaaahi Farmaajo ma hayn karo Kheyre marnba hadii Fahad kii xukunka ku haayay ay ka soo go’aday in Kheyre baxo” ayuu yiri Siyaad Maxamud Shire.
Dhanka kale Fahad Yasin ayaa u sheegay saaxibadiisa in a ay adkaan doonto in xukunka ay ku sii nagaadaan hadii aanan isbadal deg deg ah la sameeynin. “ Ninkii aan ku badalan lahayn ayaan ku mashquulsanahay, laakiin Kheyre waanu kala guurnay”. Ayuu yiri Fahad, mar uu la hadlaayay qaar kamida xildhibaanada Baarlamaanka.
Asbuucyadii la soo dhaafay ayaa Fahad iyo kooxaha u adeega waxa ay ku mashquulsanaayeen soo xulista qofkii ay ku badalan lahaayeen Xasan Kheyre, kaas oo ah shaqsi ka tarjumi karo danahooda diimeed iyo midkooda gaarka ah.
Sida MOL loo xaqiijiyay, liiska Fahad waxaa ku jira siyaasiyiin gacan saar la leh isaga, qaar uu u arko in ay u adeegi karaan danahiisa gaarka ah ama ay wadagaan xulufeysiga diimeed. Liiska waxaa ka mida; Cabdikarin Guleed, Nuur Fuursade, Cali Maxamed Geedi, Dahir M Geele, Xildhibaan Cabdulqaadir Cosoble Cali , Cabdiraxmaan Baadiyow, Abshir Bukhaari, Cabdbdirahman Dahir Cusman, Cumar Dhageey.
Dhanka kale beesha Murusade ayaa ka falcelisay arintaas iyaga oo sheegay in ayan marnaba ogolaan doonin in Fahad Yasin uu Kheyre ku bahdilo Muqdisho. “ ..u sheega Fahad, isagaa baxaayo ee Kheyre meel uma socdo.. waxaana kula talinayaa in uu raadsado meeshuu aduunka uga noolaan lahaa hadii uu isku dayo in uu Kheyre ceyriyo isaga oo adeegsanayo awooda uu ku leehaya dowlada” Sidaa waxaa yiri M. Cabdikarion Gambe oo ah ninka lacagaha u hayo Xasan Kheyre.
Previous articleWaxgarad & Aqoon yahan soo saaray Bayaan Labaad “Qeylo Dhaan Qaran”
Next articleMuuse Biixi oo Hargaysa kula kulmay wafdi ka socda dalka Kenya